Kunezinto eziningi amathuluzi ngazo ungathola izimpendulo zemibuzo eminingi, futhi sikwazi ukubikezela isiphetho. Futhi omunye indlela eminingi yasendulo futhi yangempela siwukuzibusa emphemeni Tarot. Ikhadi ngalinye sinenai ayo, futhi ezihlukahlukene izakhiwo, esekhona, ongaxazulula ezihlukahlukene imisebenzi. Akunandaba, yini ehlangene inkinga noma umbuzo, uthando, impilo, umsebenzi, noma njengoba phi nye sphere yokuphila komuntu. Ukuzisebenzisa kahle Tarot iyobheka isithombe esikhulu futhi uthole izimpendulo ezishaya emhloleni.
Incazelo lasso Justice
Justice, noma njengoba ibizwa, iyona lasso lwesishiyagalombili Justice Tarot. Kwezinye onezitezi it can ngaphansi inombolo nanye. Ngokuvamile kule mephu zibonisa owesifazane, ephethe inkemba futhi izikali. Uma siqhathanisa ngayo unkulunkulukazi ubulungiswa, Themis ke kukhona omunye umehluko okukhulu - kumephu ngowesifazane ngamehlo ububanzi. Arkan Justice Tarot elifanekisela ubulungiswa ophakeme, esingenakubalwa ebathenga, ke akakhethi ngokuphelele futhi bakwazi ukumelana kwesivivinyo sabantu engibathandayo zikhona njalo namathonya ngaphandle. Futhi izikali ongokomfanekiso figure ezibonisa ukunemba izahlulelo zayo, bese yehla inkemba, kusho ukuthi esiqinile.
Justice Tarot: Inani ukubhula abavamile
Uma ukuqondanisa akuyona indaba ephathwayo, futhi lokhu kahle ngesihibe wawa esimweni iqonde, inani layo - kuyacaca isimo. Libonisa umgomo ukucabanga, ubuqotho kanye conscientiousness lokwahlulela, umbono olinganiselayo futhi ngokwethembeka sezinto. I kwenze Arkan uthi ubulungiswa, kumnyama noma kubomvu, buyobuyiselwa.
Uma sicabangela ukubaluleka ezingeni kwansuku zonke, ayeka Justice Tarot elikushoyo wezenzo zomuntu nemiphumela, okungukuthi, noma yimuphi nesenzo sakhe esihle kuzoholela okuhle nokubi - okubi. Kungakhathaliseki ukuthi izinhloso umuntu, uma indlela injongo kuyoba ngabazeka ke impendulo womhlaba ngeke kufaneleke. Ngamanye amazwi, ibalazwe kubonisa umthwalo kakhudlwana ukuze nezenzo ezenziwe ngumuntu. Ngakho-ke kufanele kube ukuyiphendula ngoba konke utholiwe.
Uma lokhu kahle ngesihibe liyavela ukusabalala sesimweni nabokhulumile, libonisa ishayise inkinga lokho kuyoba eside kungalungiswanga, mhlawumbe kuzoba kokuqulwa kwecala. Ngokushesha othile uyodala nokhahlo sifundo esihuquzelayo, kodwa kungenzeka ukuthi izohlomula esikhathini esizayo.
Inani amakhadi ezandleni, e-career kanye nomsebenzi
Uma simo, leli khadi ilungile, kusho ukuthi emsebenzini, umuntu uyazibuza, kubalulekile ukuba siziphathe olinganiselayo, ethembekile futhi ehloniphekile. Kungcono sinake imisebenzi ababelwe lula ukusatshalaliswa umthwalo kubo. Atu ubuqiniso Taro ingaphinda Kusho simo yokuthi phambi ixazululwe ezinye izinkinga, voltage ezivamile Ungabeka. Ngezinye izikhathi kusho ukuthi kungenzeka kube nesimo esinzima lapho ngeke kwenzeke ukuba baqonde ngaphandle ukubandakanywa izinkantolo. Uma kukhona inkinga engokomthetho mayelana ingcebo yezinto ezibonakalayo, bese Themis izoba ohlangothini silwane.
Elibekiwe Ikhadi Justice Tarot nabokhulumile kungasho ukuthi maduze abantu uzokwenza iphutha ezokwenza umuntu abe nethala nemiphumela ebuhlungu. Uma kukhona izinkinga ne umthetho, umbuzo kuyonqunywa hhayi umusa. Kodwa iyiphi Isivivinyo imisiwe isikhathi ngokwanele eside.
Ukuhunyushwa amakhadi amnyama empilweni
Lokhu lwaleli ngendlela evamile ibonisa ukuthi impilo ephelele evamile. Kuyinto ngokugcwele kuhambisana izici yobudala bakwaGadi Imizimba yakhe. Ngakho-ke, nakho kulesi sici akudingekile. Justice Tarot linencazelo omuhle. Uma okulesi simo, ivuliwe phezu, kusho ukuthi umuntu enenkinga izivikeli mzimba. Okwamanje, isimo ukuwohloka okubonakalayo, futhi lokhu kuthambekela izoqhubeka, ngakho kuwufanele ukunaka kuye. Kuyinto efiselekayo ukuqinisa amasosha omzimba futhi baphendukele ochwepheshe iseluleko ukuze ligweme izinkinga ezingase zivele.
Ukuqagela othandweni nobudlelwano
Arkan Ubulungisa isikhundla salo esivamile e ukubikezela uthando kubalulekile ukuba senze izinqumo ezinhle. Ngamanye amazwi, abantu kufanele sina nokuhlaziya izenzo nezinhloso zabo, zama ukugwema zokukhwabanisa ngesandla sakhe, hhayi bayeke uzakwethu izinkinga siqu. Ngaphezu kwalokho, kahle ngesihibe kuyinto nokuqaphela nemiphumela yezenzo zabo, yeka amathemba kukhona kulesi simo futhi iziphi izinyathelo okufanele zithathwe esilandelayo. Kukhona ukuthi kungenzeka ukuthi ubuholi kufanele aphinde acabange ubuhlobo. Into esemqoka - kuyinto ukudlala ngobuqotho, ngobuqotho aphathe umlingani wakho futhi kuhloniphe izithakazelo zayo. Ngaphezu kwalokho, uma kunomehluko umbhangqwana, omunye abalingani has athambise isandla, ukuba banake amaphutha nokuziphatha yayo ukuba benze ukulungisa.
Incasiselo Justice Tarot Inani ubuhlobo kuwumqondo ongathandeki, sisikisela ukuthi ubuhlobo akanayo amathemba. Abanalo esizayo, futhi ukudabula pair kumane akunakugwenywa.
Ukubhula kugunyazwa ukuhlolwa ubuntu
Map of Justice ichaza umuntu muhle kakhulu nabafundisekile ngubani yisazi enkulu kunoma yimuphi umkhakha. Lo muntu kungaba elibanzi ukuhlola isimo uphinde wenze izinqumo ezinolwazi. He is beqiniseka amakhono abo siqu futhi ukwahlulelwa, kunjalo ungawenzi amaphutha ngenxa eziyinkimbinkimbi. Arkan sibheke phansi isixwayiso sokuthi abantu uyazibuza, ungawa ngaphansi ithonya elibi isihloko elihlobene ne uhulumeni noma izinhlangano ezingokomthetho.
Arkan Justice njengoba imephu,
Uma ngabe le khadi uphonse ibhalansi njengoba ekubizweni izenzakalo konyaka, ngakho lokhu kuyoba isikhathi esibalulekile ekuphileni sakwaGadi. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba sibe nanesikhathi ukuhlolwa olunzulu izindaba zayo siqu, futhi ikhambi zonke izinkinga, zonke izinyathelo okumelwe icatshangelwe, kanye zonke izinqumo. Zonke izenzakalo ngonyaka ozayo lithembela ngokuphelele umuntu. Arkan Tarot Justice kubonisa ukuthi, ngenxa yanoma yisiphi impumelelo kuyodingeka wenze umsebenzi othile, kodwa izithiyo ngeke, uma ethanda ukwamukela zibhekane nemiphumela yezenzo zazo. Noma yisiphi isenzo ziyoba nemiphumela, ngakho-ke kubalulekile ukuba ucabangisise kahle ngezinselele isinyathelo ngasinye, kokucabangela "ngobuhle nangobubi bawo".
Ngokuphathelene nomsebenzi nemali, ngaleso sikhathi kuyoba khona ehambisana ukujabulisa isilwane esihuquzelayo, ngeke akhohlise noma lokusizakala ke. Kodwa uma ethanda aphumelele nenkohliso, lutho okuhle, wavele ngeke aphumelele. Kule ndaba, akufanele sikhohlwe mayelana imithetho futhi lithathele zibhekane nemiphumela yezenzo zazo.
Ngokuphathelene nabantu, ke kukhona futhi nokungakhethi ezibalulekile nokulinganisela. Kuye isilinganiso sakwaGadi, umuntu, ngeke aphendule naye ukubuya, okungukuthi, uma isilinganiso sakhona ngobuqotho ke izosebenza kuze ngobuqotho manipulation nenkohliso asihole ukuphelisa ituthuko engakalungi.
Ngokuphathelene nempilo ke kubalulekile ukulawula izenzo zabo. Ukunakekela kanye kuluqinisa, abantu bazokwazi ukuze ulondoloze impilo enhle, kodwa noma isiphi isenzo kwenziwe alimaze ezempilo, qiniseka ukuthi uyazindla ngendlela kuso.
Kuba semtsetfweni ikhadi kosuku
Olwehlayo amakhadi njengoba kosuku kahle ngesihibe isidingo ukucabanga esisangulukisayo. Nawurarulula ukushayisana noma isinqumo kufanele nakanjani acabangele nangemiphumela engaba khona izenzo zabo. Kukhona ithuba elihle lokuthi umuntu kuyothiwa ukukhokha ngokuvumelana akhawunti endala, aphendule ngenxa yezenzo ezenziwa ngaphambi, kodwa lokho akusho Ihambe negative, konke kuncike isenzo.
Justice Tarot: inhlanganisela Elikhulu Arcana
Justice ngokuhlanganyela jester iyona ukungayinaki nohlaka osungulwe futhi iziqondiso, kanye UKUHLEHLISWA kunjalo.
Ngokuhlanganyela Umahalayi Leli khadi kusho ukuthi imithetho isistimu abasetshenziswa ngoba amaphutha abo, noma ukundlula kubo ngesibindi, ukuthola izindlela ezengeziwe.
Lihambisana nompristikazi lasso uthi isidingo ukuthola umnyombo, esisuseni, kanye nesidingo ukwenza okuningi phezulu ngenxa ubulili bubuhle.
Inhlanganisela nge iNdlovukazi yakhuluma ngesidingo ukuze kwesigwebo noma kokwenza isinqumo sina. Kuyadingeka ukuba ngokuqinile aphathe isimo.
Justice ngokuhlanganyela uMbusi uthi ukuyeka lapho evuma.
Nge hierophany - liyakhuluma ngokuphela ukubaluleka isixazululo sokuthula ukuba impi, ukulinganisela futhi ibhalansi isimo.
Oluhambisana Love uthi izinkinga ezingase ziphakame ngenxa suspiciousness nezahlulelo okungalungile.
Kuhlanganiswe ne yezinqola wawusho izithiyo kanye nesidingo ngaphambi kokuqala ukuqala kokusetshenziswa kwezinhlelo ukuthatha isinqumo esingathi sína.
Kanye Force, leli khadi kusho ukuthi umthetho ohlangothini ukuqagela.
Kanye Hermit Leli khadi ukhuluma ngivalelwe ejele.
Wheel of Fortune Nobulungisa Tarot - ukubaluleka le nhlanganisela kusikisela ukuthi abantu ubulungiswa.
Lapho kuhlangene umuntu olengiswe kusho ukuthi sakwaGadi inenkinga nge abomthetho, ukuncika kwabo noma okunye nezinkinga credit.
Inhlanganisela Major Arcana Tarot Ukufa Nobulungisa kubika umusho kuqalisa. Noma isidingo ukuthola izindlela ezintsha ukuze ubudala kuyinto ukuphela efile.
Nale ikhadi Ukulinganisela lasso kusho ukuthi umusho kuyoba ethambile kunokulindelekile.
With The Devil - umusho engenabulungisa, zokugwazela amajaji.
Ngokuhlanganyela Tower of ukubaluleka amakhadi lithi maduze sizovala ubuhlobo.
Justice ngenkulumo Star mayelana amathemba zigcwaliseka.
Nge the Moon - izimo Nebula, ukuphithaniswa isimo.
Inhlanganisela Sun Nobulungisa wathi mayelana kalula yokuxazulula le nkinga, ukuntuleka kwezinkinga nezithiyo.
Justice eNkantolo waxwayisa ngokuthi umuntu kuyomelwe aphendule ngenxa yamaphutha akhe esikhathini esidlule.
Inhlanganisela Arcana Justice and Peace, wathi umphumela ojabulisayo zamaviyo sokukhanya silwane ukuphila.
"Buck uSeti ingane": imibono mayelana izidakamizwa. Umyalelo, intengo kanye analogue imithi
Onion ikhasi: ukwelashwa, ukubuyekezwa, okuqanjiwe. Secrets of imithi yendabuko
Kuphothulwe 4-FSS ngenxa ikota kanye nefomu lokubika. ifomu Umnqamulajuqu 4-FSS